Football Khabar » यी हुन् ‘द्रुत गति’ का टप–५ फुटबलर !
यी हुन् ‘द्रुत गति’ का टप–५ फुटबलर !
विश्व फुटबलको वर्तमान मञ्चमा सबैभन्दा ‘फास्ट’ खेलाडी को होला ? यसबारे धेरैले ख्याल नगरेका हुन सक्छन् । वा, कतिले मैदानमा देख्दै आएका र आफूलाई लागेका भन्दा फरक खेलाडी पनि हुन सक्छन् । फुटबलको तंथ्याक संकलन गर्ने चर्चित संस्था ‘ओप्टा’ले यसको नयाँ तथ्यांक निकालेको छ । उसले ३० वर्ष नाघेका खेलाडीमध्ये सबैभन्दा फास्ट खेलाडीको सूची बनाएको हो ।
सो सूचीमा वर्तमान अवस्थामा सबैभन्दा द्रुत गतिका ५ जना फुटबलर रहेका छन् । जसमा सबैभन्दा द्रुत गतिका खेलाडीमा इटालियन युभेन्टस तथा पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहेका छन् । हाल ३५ वर्ष पुगे पनि उनी यो समयका सबैभन्दा फास्ट फुटबलरमा यथावत हुन् । गत फेब्रुअरीमा ३५औं जन्मदिन मनाएका रोनाल्डो प्रतिघन्टा ३८.६ किलोमटिर दौडिन सक्छन् । आधुनिक फुटलबमा उनको गतिसँग बराबरी गर्ने वा उछिन्ने कुनै खेलाडी छैनन् । रोनाल्डोलाई ३५ वर्षको बढ्दो उमेरले अझैसम्म छेकेको छैन ।
दोस्रो नम्बरमा स्पेनिस क्लब रियल मड्रिड तथा वेल्सका फरवार्ड ग्यारेथ बेल छन् । बेल र रोनाल्डोले रियलमा सन् २०१३ देखि २०१८ सम्म सँगै खेलेका थिए । आधुनिक फुटबलको मैदानमा ‘घोडा’ उपमा पाएका बेल साँच्चै छिटो दौडिने खेलाडीमा पर्छन् । हाल ३० पुगे पनि बेल प्रतिघन्टा ३६.९ किलोमिटर दौडिन सक्छन् ।
तेस्रो नम्बरमा इंग्लिस क्लब आर्सनल तथा गाबोनका पियरे इमरिक अउबामेयाङ रहेका छन् । उमेरले ३० वर्ष पुगेका उनी प्रिमियर लिगका सबैभन्दा द्रुत गतिका खेलाडी हुन् । उनी प्रतिघन्टा ३४.६ किलोमिटर दौडिन सक्छन् । उनी पूर्वक्लब बोरुसिया डर्टमुन्डमा छँदा द्रुत गतिका कारण चर्चामा आएका थिए ।
चौथो नम्बरमा थियो वालकुट रहेका छन् । इंग्लिस क्लब एभर्टन तथा इग्ल्यान्डको राष्ट्रिय टोलीका उनी उमेरले ३१ वर्ष पुगे पनि उनको गति कम वेगिलो छैन । उनी अहिले पनि मैदानमा प्रतिघन्टा ३२.७ किलोमिटर दौडिन सक्छन् । अंकका हिसाबले उनी अहिले प्रिमियर लिगकै दोस्रो फास्ट खेलाडी हुन् ।
पाँचौं नम्बरमा स्पेनिस क्लब बार्सिलोना तथा अर्जेन्टिनाका लिओनल मेस्सी छन् । सानो कदका मेस्सी पनि युरोपियन फुटबलको दुनियाँमा फास्ट फुटबलरमै पर्छन् । सन् २००४ देखि लगातार बार्सिलोनाबाट खेलिरहेका मेस्सीले मैदानमा प्रतिघन्टा ३२.५ किलोटिमरका हिसाबले दौड लगाउन सक्छन् । तर, मेस्सीको गत वर्षको भन्दा यस वर्षको ‘स्पिड’ घटेको छ । गत वर्षको तथ्यांकअनुसार उनको प्रतिघन्टा स्पिड ३३.४ किलोमिटर थियो । उनी हाल ३२ वर्षका भए ।
प्रकाशित मिति १४ असार २०७७, आईतवार ०६:३८